सीमापारिका ‘गोरखाली’- विचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २७, २०७४ सम्पादकीय
प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताको स्वार्थअनुरूप चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गर्न खोजिएको छ । करिब एक वर्षदेखि संसद्मा थन्किएको विधेयक डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनपछि अघि बढाइए पनि केही प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोल्न लागिएको हो ।
खासगरी राजधानीमा मनसायपत्र लिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन फुकुवा गर्नु अनशनरत डा. केसीको माग र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझावविपरीत त हो नै, यसले सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता/प्रतिबद्धताको उल्लंघनसमेत गर्छ ।